Laba Magaalo oo Isbaanish Ah Oo Ka Mid Ah Magaalooyinka Suugaanta Ee Unesco | Suugaanta hadda jirta
Laba Magaalo Isbaanish Ah Oo Ka Mid Ah Magaalooyinka Suugaanta Ee Unesco
Granada, waa magaaladii ugu horeysay ee Isbaanish ah ee UNESCO u aqoonsato inay tahay Magaalo Suugaaneed.
La Unesco bilaabay inuu dhiso Shabakadaha Iskuxirka Magaalooyinka sanadkii 2004, oo dhowr qaybood laga aqoonsan yahay: Suugaan, Shineemo, Muusik, Farshaxanno iyo Farshaxanno Caan ah, Naqshadeynta, Farshaxanka Dijital iyo Gastronomy.
Shuruudaha xulashada Magaalooyinka Suugaanta waxay la xiriiraan taariikhda daabacaadda, barnaamijyada waxbarashada iyo tirada maktabadaha, buugaagta buugaagta iyo xarumaha dhaqanka ee magaalada. Sidoo kale xafladaha suugaanta iyo kaqeybgalka muwaadinka. Tan iyo markaas, qaybta suugaanta, waxay abaalmarin siisay 20 magaalo oo adduunka ah labana waa Isbaanish, Barcelona iyo Granada. Segovia waxay hada u tartameysaa Abaalmarinta.
1 Edinburgh (Iskotland)
2 Melbourne (Ustaraaliya)
6 Norwich (Boqortooyada Midowday)
9 Heildelberg, Jarmalka
10 Granada (Isbaanish)
12 Ulyanovsk (Ruushka)
13 Baqdaad (Ciraaq)
15 Lviv (Yukreeniyaan)
18 Nottingham (Boqortooyada Midowday)
19 Óbidos (Boortaqiis)
21 Milano, Talyaaniga)
22 Bucheon (Kuuriyada Koonfureed)
26 Manchester, Boqortooyada Ingiriiska)
27 Durban (Koonfur Afrika)
28 Lillehammer (Noorway)
Edinburgh waxay ahayd Magaaladii ugu horreysay ee Suugaanta ee UNESCO sanadkii 2004. Maxay tahay in Edinburgh ay noqoto magaalo suugaaneed? Qorayaasha xiriirka caalamiga ah sida Walter Scott ama Robert Louis Stevenson, kan ugu weyn Bandhigga Buugaagta Caalamiga ah kaas oo ay dhex maraan in ka badan 800 qoraa sanad walba magaaladuna leedahay in ka badan 50 dukaan buugaagta lagu iibiyo.
Melbourne waxay ahayd magaaladii labaad ee suugaanta ee UNESCO, sanadkii 2008, afar sano kadib. Maxay tahay Melbourne inay ahaato magaalo suugaaneed? A shabakad ballaadhan oo maktabado iyo buugaagta buugaagta lagu iibiyo, Shabakadda ugu weyn ee daabacaadda ee Australiya iyo afar xafladood oo suugaaneed ah: Bandhigga Qorayaasha Melbourne, Dabaal-degga Gabayga Farshaxanada, Alfred Deakin Seminaaro Hal-abuurnimo iyo Bandhigga Qorayaasha Soo Baxaya
Maxay Iowa u tahay inay ahaato magaalo suugaaneed? Waa magaaladii lagu baray Master-kii ugu horreeyay ee curinta Qoraalka adduunka, 1936. 25 ka mid ah qorayaasheeda ayaa ku guuleystay abaalmarinta Pulitzer tan iyo 1955. Waxay martigalisaa dhowr xaflado caan ah oo suugaaneed iyo tartamo waxayna leedahay shabakad weyn oo bakhaarro buugaag ah.
Waa maxay Dublin waa inay noqotaa magaalo suugaaneed? Marka lagu daro inuu yahay goobta Ulysses waxaa qoray James Joyce, u dabaaldegaan Ubax xaflad dhan oo lagu sharfayo isaga oo dadku u labistaan ​​sida jilayaasha ka soo jeeda sheeko. Joyce ka sokow, iyagu waa Dubliners Oscar Wilde, Bram Stoker, WB Yeats (Nobel Prize), Samuel Beckett, Jonathan Swift, Bernard Shaw (Nobel Prize), Samuel Beckett (Nobel Prize) ama Seamus Heaney (Nobel Prize).
Maxay Reykjavik u tahay inay noqoto magaalo suugaaneed? Iceland waa wadanka aduunka ka jira daabacaa cinwaano badan oo qofkiiba ah oo waxay soo bandhigaan Arnaldur Indridason, oo ah mid ka mid ah buugaagta ugu caansan ee lagu iibiyo dambiyada casriga ah.
Norwich (Boqortooyada Midowday)
Maxay tahay Norwich inay ahaato magaalo suugaaneed? Waa magangelyadii ugu horreysay ee Ingiriisku u qoro qorayaasha hanjabaadda tan iyo 2007 oo wuxuu xubin ka ahaa aasaasihii Shabakadda Caalamiga ah ee Qaxootiga (ICORN).
Juliana of Norwich (1342 - 1416) waa qoraaga buuga ugu horeeya ee ingiriisi ay qoro haweenay.
Maxay tahay Krakow inay ahaato magaalo suugaaneed? Waa lMagaalada ay ku guuleysteen abaalmarinta Nobel Prize ee suugaanta, sida Wislawa Szymborska iyo Czesław Miłosz.
Magaalada gudaheeda waxaa ka mid ah qoraalo iyo maktabadaha ugu caansan adduunka. Bandhigyo kala duwan oo suugaan ah sida Miłosz Festival iyo Conrad Festival ayaa la qabtaa.
Magaalo aan dad badani ogeyn, maxay Dunedin u tahay magaalo suugaaneed? Smaktabaddu waxay ahayd maktabaddii ugu horraysay ee dadweyne iyo bilaash ka hesho dalka. Dunedin wuxuu hoy u ahaa in badan oo ka mid ah qorayaasha iyo abwaannada loogu dabaaldego New Zealand iyo sidoo kale sawirro iyo qorayaasha buugaagta carruurta. Dhexdeeda ayaa ah xididdada awoowe ee dadka Kai, kuwaas oo dhaqanka afka waxay tolnayeen halyeeyo iyo sheekooyin qarniyo badan. Sidoo kale waa xarunta dhexe ee Xarunta Buugga, xarun gaar ah marka la eego taariikhda suugaanta, daabacaadda iyo baaritaanka barmaamijyada cusub iyo moodooyinka daabacaadda.
Maxaa ka qaldan Heildelberg inay noqoto magaalo suugaaneed? Halkan jaamacaddii ugu horreysay ee Jarmalka ku dhalatay, Jaamacadda Ruperto Carola. Waxay had iyo jeer ahayd xarun barasho iyo suugaan waxayna martigelisay qorayaal caan ah sida Goethe, Clemens Brentano, Bettina von Arnim, iyo Friedrich Hölderlin. Waxay sidoo kale ahayd sariirtii qarnigii XNUMX-aad ee jacaylka Jarmalka.
Laga soo bilaabo 2014 Granada waxay ahayd magaalo suugaaneed, Isbaanishkii ugu horreeyay ee qaata abaalmarinta Maxay leedahay Granada inay noqoto magaalo suugaaneed? Qoraa caan ah oo caan ah Federico García Lorca ayaa loo khaarijiyay xilligii xukunkii Franco xaaladdiisa khaniisnimo iyo fikirkiisa garabka bidix. Dad badan iyo munaasabado dhaqameed, oo ay ku jiraan xafladaha Granada Noir oo daadad ka dhigaya gees kasta oo magaalada ah oo leh shaybaarro dhaqan oo kala duwan, kaliya ma ahan suugaan, waxaa haga Jesús Lens.
Maxaa ka qaldan Prague inay noqoto magaalo suugaaneed? Qorayaasha caanka ah sida Franz Kafka, Max Bod, Rainer Maria Rilke, mise dabcan? Milan kundera. Jaamacadiisa, Charles University waa jaamacadda ugu faca weyn bartamaha Yurub.
Looga yaqaanay inay tahay magaalada uu ku dhashay Lenin, maxay leedahay Ulyanovsk inay noqoto magaalo suugaaneed? Waxay caan ku tahay inay tahay magaalada qoraaga Ivan Goncharov, abuuraha Oblomov, nin dhalinyaro ah oo caajis ah oo caajis ah oo maalintii sariirta ku qaatay. Magaalada gudaheeda xaflad suugaaneed ("Ka kac sariirta") ayaa lagu qabtay sharaftiisa. Waxaa ku yaal in ka badan 30 dukaanno buugaag ah, 39 maktabado dadweyne, Maktabadda Gaarka ah ee Gobolka Ulyanovsk, maktabad bilaash ah oo ku taal garoonka diyaaradaha iyo in ka badan 200 maktabadaha iskuulka ah
In kasta oo ay umuuqato doorasho layaab leh marka hore, maxaa sameeya Baqdaag inay noqoto magaalo suugaaneed? Waagii hore oo saameyn weyn oo suugaaneed ku leh gobolka, sidii Baqdaad ay yeelatay mid ka mid ah maktabadaha ugu muhiimsan xilliyadii hore: Bayt al-Xikma waxaa la aasaasay qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga, kaasoo lahaa buugaagtii ugu badnayd ee adduunka laga helo badhtamihii qarnigii XNUMXaad.
Goobtii uu ku dhashay mid ka mid ah gabayaagii carbeed ee waaweynaa, Abu Al Tayeb Al Mutanabbi (qarnigii XNUMXaad).
Maxaa ka qaldan Tartu inay noqoto magaalo suugaaneed? Waa magaalada horseed u ah difaaca dhaqanka dalka iyo Estoniyanka oo ah luqad ahaan. Sannadka oo dhan waxaa la qabtaa xaflado suugaaneed oo kala duwan. Laba hay'adood ayaa dhiirrigeliya daraasadaha iyo dhaqanka Estoniya: Jaamacadda Tartu iyo Matxafka Suugaanta ee Estoniya.
Maxaa ka qaldan Lviv inay noqoto magaalo suugaaneed? Dukaamo buugaag iyo maktabado badan: 45 buugaagta lagu iibiyo, 174 maktabado iyo 54 matxafyo iyo dad aad uga qayb qaata nolosha dhaqanka ee magaalada. Isaga En Lvis waa madbacaddii ugu da'da weyneyd (1586) ee wali shaqeysa.
Maxaa ka qaldan Ljubljana inay noqoto magaalo suugaaneed? Daaran Ljubljana waxay martigalisaa in kabadan 10.000 oo dhacdooyin dhaqameed ahmuusikada, masraxa iyo farshaxanka, oo ay ku jiraan 14 xaflado caalami ah. Muwaadin kasta wuxuu booqdaa maktabadda dowladda hoose shan jeer sanadkii. Ljubljana waxaa lagu yaqaan dhaqankeeda jaamacadeed.
Barcelona, ​​oo ah magaalada Isbaanishka leh dhaqanka ugu dheer ee daabacaadda, ayaa UNESCO u magacowday Magaalo Suugaaneed.
Maxaa ka qaldan Barcelona inay noqoto magaalo suugaaneed? Afar xafladood oo suugaaneed, oo ay ku jiraan Barcelona Negra iyo taariikh daabacan oo xoog leh oo soo jirtay waqtiyadii dhexe, ayaa martigaliya xarunta guud ee kooxaha daabacaadda ugu waaweyn dalka. Waxay abuurtay qorayaal tiro badan oo waawayn sida Manuel Montalbán, Alicia Giménez-Barlett, abuuraha gabadhii ugu horreysay ee booliis ah ee ku jirta sheeko dambiyeedka Isbaanishka, Eduardo Mendoza, Ana María Matute, Carlos Ruiz Zafón, Mercé Rodoreda, Ildefonso Falcones ama Víctor del Arbol, Knight ee Farshaxanka Faransiiska iyo Waraaqaha, iyo kuwo kale. Waxay leedahay in ka badan 122 buugaagta buugaagta iyo shabakad ballaadhan oo maktabado dadweyne ah. U dabbaaldeg sannad kasta maalinta Sant Jordi, maalin ay dhaqan u tahay in la bixiyo buugaag iyo ubax.
Nottingham (Boqortooyada Midowday)
Maxay tahay inay Nottingham noqoto magaalo suugaaneed? Ka sokow inuu yahay sariirta Robin Hood, qorayaasha sida Lord Byron ama DH Lawrence. Sidoo kale 18 maktabado iyo dukaamo buugaag badan oo madaxbanaan, marka lagu daro xaflada suugaanta Bandhiga Nottingham ee Ereyada.
Maxay Óbidos u tahay magaalo suugaaneed? Bannaanka waddooyinka dalxiis ee caadiga ah ee Bortuqiiska, waa jawharad suugaaneed, oo leh dukaamo buugaag lagu sameeyay meelaha ugu badan ee aan laga filayn: Kii ugu horreeyay wuxuu Kaniisadda Santiago, oo leh in ka badan 40.000 oo buug. Laga soo bilaabo, dukaamada buugaagta cusub ayaa laga abuuray goobo yaab leh, sida suuqa ama khamriga.
Maxay Montevideo u tahay magaalo suugaaneed? Qorayaasha ayaa jecel Eduardo Galeano, Mario Benedetti ama Juan Carlos Onetti. Waxay leedahay wax weyn Suuqa buugaagta Axadda: Tristán Narvaja.
Maxay Milan ku qasban tahay inay ahaato magaalo suugaaneed? Milan waa mid ka mid ah xarumaha daabacayaasha waaweyn, oo qaarkood taariikh ahaan muhiim yihiin. Magaalada uu degan yahay Darío Fo, Abaalmarinta Nobel.
Bucheon (Kuuriyada Koonfureed)
Maxay Bucheon u tahay magaalo suugaaneed? Dhaqankeeda suugaaneed wuxuu ku xiran yahay Byun yeongro iyo Chong Chi-yong, oo ah horyaallada dhaqdhaqaaqyada gabay ee ugu muhiimsan qeybtii hore ee qarnigii XNUMX-aad.
Maxay tahay in Quebec ay noqoto magaalo suugaaneed? Nolol dhaqameed hodan ah, suugaantiisu waxay ka tarjumaysaa Francophone, Anglophone iyo Aboriginal.
Bulshada Suugaanta iyo Taariikhda ee Québec (1824) iyo Machadka Canadian ee Québec (1848) ayaa door muhiim ah ka ciyaara nolosha suugaaneed ee dalka. Waa magaalada ay ku yaalliin inta badan guryaha daabacaadda ee dalka.
Waxaa looga yaqaanaa tiknoolajiyad ka badan suugaanta, maxaa leh Seattle inay noqoto magaalo suugaaneed? In kasta oo magaceedu aanu ka iman, haddana waxyaabaha ugu soo jiidashada badan waa buugaagta buugaagta iyo tirada daabacaadaha iyo waxqabadyada ku xeeran akhriska.
Maxaa ka qaldan Utrecht inay noqoto magaalo suugaaneed? Sannadkii 1473 ayaa la daabacay buuggii ugu horreeyay ee woqooyiga Nederland, sanadkii 1516-kii ayuu soo shaac baxay ururinta ugu horraysa ee gabayo ay qortay haweenay iyo sanadkii 1892 ayaa la furay maktabaddii ugu horreysay ee boqortooyada, dhacdooyin kale oo badan oo xusid mudan.
Dabaaldeg inta u dhexeysa 20 illaa 30 dhacdooyin suugaaneed bil kasta, oo ay ka mid yihiin carruurta iyo dadka waaweyn oo leh 56 buugaag buugaag, 26 maktabado waxaana ku yaal in ka badan 200 madbacado.
Manchester, Boqortooyada Ingiriiska)
Maxaa ka qaldan Manchester inay noqoto magaalo suugaaneed? Manchester waxay leedahay shan maktabadaha dadweynaha ee taariikhiga ah, xiiso leh maahan oo keliya miisaaniyadooda, laakiin sidoo kale dhismooyinka ay ku yaalliin. Dahabkeeda aan muran ka jirin waa Maktabadda John Rylands, laga bilaabo 1899, qaabka neo-gothic. Khasnad loogu talagalay daaqadaha muraayadaha muraayadaha leh iyo saqafkeeda daboolan, laakiin, dhammaantoodba, waxa ay ku hayaan gudaha: papriiga Masar, buugaagta Coptic ama Griigga, qoraallada qarniyadii dhexe, daabacaadda Canterbury Tales (1476), Gutenberg Bible (1455) ama buug xiise leh oo ku saabsan shimbiraha mitirka-dheer ee Ameerika (1830).
Durban (Koonfur Afrika)
Maxaa ka qaldan Durban inay noqoto magaalo suugaaneed? Magaaladaani waxay martigelisay qoraayo badan, sida kii ugu horreeyay ee Afrika ee Nobel ku guuleysta, Alan Paton, ama abwaan Bessie Head. Bandhigyada suugaanta ee muhiimka ah sida Gabayga Afrika ayaa halkan lagu qabtaa.
Maxaa ka qaldan Lillehammer inay noqoto magaalo suugaaneed? Iyada oo ay deggan yihiin oo keliya 27.000, qarnigii XNUMX-aad waxay xarun u noqotay rinjiyeyaasha iyo qorayaasha, qaarkoodna waxay ku guuleysteen Abaal-marinta Nobel ee Suugaanta sida Bjørnstjerne Bjørnson iyo Sigrid Undset.
Waxaan rabnaa Nasiibka oo dhan ee hindisaha Segovian si Segovia ay ugu xigto ku soo biirista liiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Noticias » Laba Magaalo Isbaanish Ah Oo Ka Mid Ah Magaalooyinka Suugaanta Ee Unesco
George RR Martin wuxuu ka hadlayaa dhamaadkiisii ​​Game of Thrones
Fannaaniin, fannaaniin iyo buugaag iyaga ku saabsan iyo milicsigooda